कसरी पत्ता लगाउने बच्चाको श्रवण शक्ति? – Health Post Nepal
२०७९ असार ७ गते १२:४८
बच्चा जन्मेको ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्ममा भाषा सिक्नका लागि महत्वपूर्ण समय हो। त्यतिबेला मस्तिष्क विकाससँगै परिपक्व पनि हुन्छ। अनुसन्धानहरुले समयमै उपचार, राम्रो भाषाको सीप र तालीम पाएमा श्रवण ह्रास भएका बच्चाहरुमा बोल्ने क्षमता उपचार तथा तालीम नपाएको श्रवण ह्रास भएको बच्चाको तुलनामा राम्रो हुन्छ। त्यसकारण बच्चाहरुमा श्रवण ह्रासको पत्ता लगाई पुनःस्थापना गरी समावेशी शिक्षामा पढाउन सकिन्छ र अन्य सामान्य बालबालिकासरह पठनपाठन गर्न सक्छ। त्यसैले बालबालिकाहरुको समयमै कान परीक्षण गर्नुपर्छ।
निम्न परीक्षण गरि बच्चाहरुमा सुनाइको सामान्य सामान्य परीक्षण गर्न सकिन्छः
(क) सुसेलीबाट परीक्षणः बच्चाको कानको पछाडि गई सुसेली निकाल्ने। सुसेलीको आवाजलाई कुन हदसम्म सुन्छ सो विचार गरी उसको कानको सुन्ने क्षमता नोट गर्ने।
(ख) घडीको टिकटिक आवाजः एउटा चलिरहेको घडी लिई बच्चाको कान पछाडी गई घडीलाई अगाडि बाट पछाडी सार्ने ÷ल्याउने, लैजाने । टिकटिक आवाज कति टाढा वा नजिकसम्म सुन्न सक्छ, सो नोट गर्ने।
(ग) ताली पिटनेः बच्चाको कान पछाडी गई बिस्तारै ताली पिट्ने। बच्चाको प्रतिकृया बुझ्ने । सुनेको न सुनेको छुट्याई नसुनेको भए क्रमशः तालीको पिटाइलाई थप चर्को बनाउँदै जाने। र बच्चाले सुन्न सक्ने वा नसक्ने छुट्याई नोट राख्ने ।
(घ) चुट्की बजाउनेः चुट्की बजाएर पनि बच्चाले सुन्न सक्ने वा नसक्ने छुट्याउन सकिन्छ । यसको लागि बच्चाको कानको नजिक गई चुट्की बजाउने र उसले सुनेको छुट्याउने। चुट्की पनि सानो आवाजदेखि ठूलो आवाज निकाली बजाउने । यसरी बच्चाले सुन्न सक्छ कि सक्दैन, छुट्याउन सकिन्छ ।
सामान्य परीक्षणवाहेक निम्न तरिकाले श्रवण शक्ति पत्ता लगाउन सकिन्छः
सुस्त श्रवण कसरी पत्ता लगाउने ?
टर्निङ फोर्क प्रयोग गरेरः थर्किएको टर्निङ फोर्क (चिम्टा जस्तो धातुको वस्तु) लाई कानको अगाडि, पछाडि, निधारको मध्य भाग आदि विभिन्न स्थानमा, कानबाट विभिन्न दूरीमा राखी कानको श्रवण क्षमता जाँच गर्न सकिन्छ।
प्ले (बिहेभियरल) अडियोमेट्रीः यो विभिन्न ध्वनी उत्पन्न गरेर बालबालिकाको श्रवण क्षमता जाँच्ने गरिन्छ। विभिन्न ध्वनीलाई उमेर अनुसार बालबालिकाले टाउको हल्लाएर, हात हल्लाएर, आँखा झिम्काएर, जाँच गरिन्छ।
अडियोमिटर प्रयोग गरेरः यो शुद्ध ध्वनी उत्पन्न गरी श्रवण क्षमता जाँच्ने एक विद्युतीय यन्त्र हो। बिरामीको एउटा कानमा हेडफोन लगाउन दिइन्छ र सानोदेखि ठूलो वा ठूलोदेखि सानो गरी ध्वनी सुनाईन्छ। सुनेको ध्वनीअनुसार नतिजा एउटा ग्राफमा देखाउँछ जसको आधारमा श्रवण क्षमता निर्धारण हुन्छ।